Dowladda Itoobiya oo qorsheneysa in ay dhex dhexaadiso labada Gole ee Dowladda Federaalka
Wararkii: Sabti; July 28, 2007
Ciidamada Booliiska iyo kuwa Milatariga oo isku haya gacan ku haynta Suuqa Bakaaraha
Geedi oo la sheegay in Adis-Abab u tagay sidii uu Meles Zenawi uga hadli lahaa mooshinka qaar ka mid ah Baarlamaanku soo gudbiyeen
C/llaahi Yuusuf oo gaaray Magaalada Garoowe
Haweenay Yuhuudiyad ah oo islaamtay, Falastiina ugu baaqday in ay Kutubka dhab u qaataan
Dadweynaha Muqdisho oo ka walwalsan dadka lala baxayo xiliyadan dambe
July 28, 07: Inta beri oo laga joogo markii xabashidu gashay: Kismaayo (209), Muqdisho (213), Beledweyne (216), Baydhabo (224), Galkacyo (245),
UN: Somalia Humanitarian Situation Report 47: 27 July 2007
Waxaa maalmahan khilaaf soo kala dhex galay Baarlamaanka iyo xukuumadda uu hogaamiyo Cali Max�ed Geedi, waxa uuna khilaafkaani uu sii xoogeystay markii mooshin ka dhan ah dowladda oo la xiriira la xisaabtanka dowladda ay soo bandhigeen qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka. Xildhibaanada Baarlamaanka qaar ayaa waxay sheegeen in Xukuumadda Federaalka ay ku shaqeyneyso si sharci daro ah mudo shan bilood ah, sidoo kale waxay sheegeen in Xukuumadda looga baahan yahay in ay soo hor fariisato Baarlamaanka, isla markaana ka hadasho wixii u qabsoomay mudadii ay jirtay. Inkastoo xildhibaanada qaarkood ay ku kala fikrad duwan yihiin la xisaabtanka Xukuumadda ayaa haddana xildhibaano kale waxay qabaan in Dowladdu ay wax badan qabatay, iyagoo sheegay in xubnaha soo jeediyey in Dowladda lala xisaabtamo ay kuwo doonaya in ay helaan xoogaa lacag ah. Ra�isul Wasaare Cali Max�ed GEedi ayaa waxa uu shalay u ambabaxay dalka Itoobiya, waxayna wararka qaar sheegayaan in Ra�isul Wasaaruhu uu Dowladda Itoobiya ka doonayo sidii loo dhex dhexaadin la haa khilaafka u dhexeeya Xukuumadda iyo Golaha Baarlamaanka, waxaana la filayaa sida ay wararku sheegayaan in Wasiirka arrimaha Dibadda ee Itoobiya uu si dhaqsi leh ku soo gaaro Magaalada Baydhabo. Warar kale oo aynu ayaa waxay sheegayaan in Guddoomiyaha Baarlamaanka uu isna tagi doono Magaalada Adis-Ababa maalmaha soo socda si uu kulamo ula yeesho Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi.
Dhinaca kale maalintii doraad ahayd ayaa waxaa Magaa lada Baydhabo gaaray gawaari siday lacago la sheegay in loogu talagalay Xidhibaanada Baarlamaanka, ilaa iyo haddana lama garanayo halka ay ka timid lacagahaasi, balse wararka qaar ayaa waxay tibaaxayaan in lacagahaani yihiin kuwo loogu talagalay in lagu kala furdaamiyo Xildhibaanada. Maanta ayaa la filayaa in Baarlamaanku uu mar kale halkiisii ka sii wato doodii la xiriirtay la xisaabtanka Golaha xukuumadda, iyadoo Xildhibaanada qaarkood ay doonayaan in deg deg looga taqaluso Dowladda uu hogaamiyo Cali Max�ed Geedi.
Ra�isul Wasaaraha DFKMG Cali Max�ed Geedi oo la sheegay in Adis-Abab u tagay sidii uu Meles Zenawi uga hadli lahaa mooshinka qaar ka mid ah Baarlamaanku soo gudbiyeen
Ra�isul Wasaaraha DFKMG Cali Max�ed Geedi ayaa shalay booqasho lama filaan ay ugu ambabaxay magaalada Adis-Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana horey u sii raacay qaar ka mid ah wasiiradiisa.
Ilaa iyo hadda lama faahfaahin sababa rasmiga ah ee uu ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi ugu ambabaxay dalka Itoobiya, hase yeeshee warar ayaa waxay tilmaamayaan in Ra�isul Wasaaraha uu doonayo in Dowladda Itoobiya ay dhameyso khilaafka u dhexeeya Baarlamaanka iyo Xukuumadda, kaddib markii xildhibaano dhowr ah ay soo jeediyeen la xisaabtanka Dowladda Federaalka. Warar kale ayaa waxay sheegayaan in Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi uu doonayo in uu Adis-Ababa kulan kula yeesho wasiir ka tirsan Midowga Yurub oo u dhashay wadanka Faransiiska, kadib markii ay Midowga Yurub horey u sheegeen in madaxdoodu ay tagi Karin Magaalada Muqdisho arrimo la xiriira ammaanka.
Ra�isul Wasaaraha ayaa marka uu soo dhameysto booqashadaasi waxaa lagu wadaa in uu soo gaaro Magaalada Baydhabo halkaas oo uu ka jeedin doono khudbad uu doonayo in uu Baarlamaanka ugu faahfaahiyo waxqabadkii Dowladda mudadii ay jirtay.
Waxaa sii xoogeysanaya khilaaf xoogan oo u dhexeeya Ciidamada Milatariga iyo kuwa Booliiska ee ka hawlgala qaar ka mid ah Isgoysyada Magaalada Muqdisyo gaar ahaan Suuqa Bakaaraha iyo Isgoyska Hawl-wadaag.
Dhawaan ayaa waxa uu heshiis dhex maray guddiga Amniga qaranka iyo ganacsatada suuqa Bakaaraha, waxaana lagu heshiiyey in ciidanka Booliiska loo saaro ammaanka Suuqa iyio hareerihiisa, ciidanka Milatariga ahna laga saaro dhamaan suuqa iyio waliba Magaalada Muqdisho.
Iyadoo arrintaasi ay socoto ayaa waxaa haddana soo ifbaxayay khilaaf xoogan oo u dhexeeya ciidanka Booliiska iyo kuwa Milatariga, waxayna arrintaani sii xoogeysatay markii ciidamo Milatari ah ay damceen in ay gudaha u galaan suuqa Bakaaraha, taasna waxaa ka diiday ciidanka Booliiska. Markii ciidankaas Milatariga dib looga saaray suuqa ayaa waxay soo wateen taliyaashooda oo qaarkood sheegay in ciidamada Milatariga yihiin kuwo loogu talagalay in ay sugaan suuqa Bakaaraha iyo Isgoysyada.
Shalay oo dhan ayaa waxay labada ciidan ku kala jireen aagag, ilaa iyo haddana saraakiisha sare ee ciidamada Booliiska iyo Milatariga xal kama gaarin arrintaasi.
Ciidamo Milatari ah oo ku hubeysan qoryo ayaa waxay qaad xoog kaga qaateen haween ku ganacsanayey isgoyada Black Sea, waxaana markii dambe dib uga soo celiyey ciidanka Booliiska.
Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray Magaalada Garoowe ee Maamul Gobaleedka Puntland, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweynaha maamul gobaleedka Puntland Cadde Muuse Xirsi iyo dadweyne aad u fara badan. Booqashada C/llaalhi Yuusuf ee Garoowe ayaa ku soo beegmay xili uu qalalaaso la xiriira sicir barar uu ka oogan yahay deegaanada maamul gobaleedka Puntland, waxayna dadweynaha maamu gobaleedkaasi ku eedeeyeen maamulka Puntland in ay u damqan waayeen shacabka isla markaana ay maalin waliba daabici jirtay lacago been abuur ah oo keenay sicir barar baahsan, iyadoo Madaxweynaha Puntland Cadde Muuse uu qirtay in ay jiraan makiinado lagu farsameeyo lacagahaasi.
Dadweynaha ku nool Maamul gobaleedka Puntland ayaa iyagu dhigay banaanbaxyo ay kaga bacayaan lacaga faalsada ah ee la sameeyey, dhanka kalana cadde Muuse ayaa ku eedeeyey arrimaha Garoowe ka soo cuboonaaday ururka Islaamiga ah ee Al-islaax iyo Maxaakiimtii Islaamiga ah kuwaas oo uu sheegay in ay doonayaan in ay qas ka sameeyeen maamulka Puntland, hase yeeshee dadweynaha Puntland ayaa waxay isweydiinayaan halka ay maraan daqliga ka yimaada dekedda weyn ee Boosaaso iyo canshuuraaha laga qaado dadweynaha.
Haweenay magaceeda lagu sheegay Moran isla markaana jirta 31-jir ah oo yahuudiyad ah ayaa qaadatay Diinta Islaamka, wayna haweeneydaasi markii ay islaantay magceedii k bedeshay Magac ay ka qaadatay Qur�aanka Kariimka oo ah Aayah.
Aayah ayaa iyada oo u warameysa taleefishinka Al-jaziira waxay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in ay qaadato Diinta Islaamka, waxayna Aayah daboolka ka qaaday in ay in badan ku taami jirtay in ay islaanto, waxay sidoo kale sheegtay Aayah in ay cadaadis badan uga yimid Dhaka waalidkeed, balse aysan dheg jalaq u siin, iyadoo sheegtay in ay intaas oo dhan ka door bideyso Eebbe, isla markaana waxay sheegtay Aayah in aysan markeedii hore jecleysan Diinta Yahuuda aysanna ka qaybgalin jiran meelaha Yahuudu wax ku caabudaan, waxay kaloo Aayah sheegtay in ay dukan jirtay shanta salaadoo intii aysan islaami ka hore, iyadoo sheegtay in ay uga dayan jirtay dad islaam ah oo deris lahayd.
Aayah ayaa sheegtay in uu jaceylka Islaamka iyo iimaanku ku sii kordhay markii ay guursatay wiil carab, isla markaana ay dhex gashay qoyska wiilkaasi, waxyana ugu dambeyn sheegtay in ay aad uga naxsan tahay khilaafka cusub ee soo kala dhex galay kooxaha Falastiin, iyagoo ugu baaqday in ay kutubka Alle qaataan oo ay midoobaan, isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan Israa�iil, oo ay tilmaameen in ay dooneyso in ay ka faa�iideysato khilaafkaa cusub ee Falastiin ka dhex aloosmay.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa Magaalada Muqdisho ka jiray dhacdooyin aad u fool xun oo ay ku kacayeen ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya, kadib markii Guryo, Iskuulo iyo Goobo Caafimaad lagala baxay dhallinyaro. Dadweynaha ayaa arintaani walwal ka muujiyey, waxayna sheegeen in ay sii murjineyso xaaladda cakiran ee ka tagaan Magaalada Muqdish.
�falalka noocaan oo kale ah waxay dhici jireen, xiligii dowladdii Max�ed Siyaad, hase yeeshee, dowladdaasi waa la ogaa qofka ay qabtaan halka uu ku dambeyn jiray, bale tan ilaa iyo hadda waxaa la la� yahay dhallinyaro fara badan oo qaarkood loo qaaday dalka Itoobiya� ayay tiri Haweenay ka cabaneysay wiil yar oo ay dhashay oo ciidamada Itoobiya kala baxeen gurigooda.
Maalintii arbacada ahayd ayaa ciidamo ka tirsan Dowladda waxay galeen iskuul ku yaala Xaafadda Lambar Afar, halkaas oo ay ka wateen 20 arday iyo macalimiintoodii, sidoo kale ciidamada Itoobiya ayaa waxay iyana galeen guryo ku yaala xaafadda warshadda caanaha oo ay kala baxeen dhowr dhallinyaro ah, waxaa kaloo Isbitaalka Banaadir lagala baxay bukaanku jira iyo waliba qaar ka mid shaqaalihii ka shaqeynayey isbitaalkaasi, waayna dadku sheegaayaan in arrintaani soo dedejineyso kacdoon kale oo ka dhaca Magaalada Muqdisho.
Maxaabiis fara badan ayaa ku jirta Xabsiyada magaalada Muqdisho, kuwaas oo ilaa iyo haatan wax dacwad ah aan lagu soo oogin ama maxkad aan la saarin, qaarkood waxaa la sheegay in laga qaato lacago laaluush ah si loo sii daayo.
QADO SHARAF LOO SUUBIYEY AABAYAASHII ISBOORTIGA SOOMAALIYEED IYO CIYAARIHII UGU DANBEEYEY
Waxaa qado sharaf aad loo agaasimay oo ay goob joog ka ahaayeen dhamaan aabayaashii isboortiga Soomaaliyeed ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururweynaha KANAVA iyo EuroSom. Warka oo dhan...
Faafin: SomaliTalk.com | July 28, 2007
Doodii Moshinka Baarlamaanka DFKMG ee ka Dhanka ahayd xukuumada Prof. Geedi oo weji kale isu rogtay (waa Qaybtii labaad ee doodda) - July 27
AABAHA ISBOORTIGA SOMAALIYEED IYO XOGHAYAHA GUUD EE OLYBIKADA SOMAALIYEED OO SOO GAARAY CIYAARAHA EUROSOM
Duqa Magaalada Helsinki oo xaflad soo dhaweyn ah u sameeyey kasoo qayb galayaasha ciyaaraha Eurosom
Ciidamada Itoobiya oo fal aad u fool xun ka gaystay deegaanka warshaddii hore ee Caanaha
.Hay’adda Manhal oo deeq raashin gaarsiisay Afgooye..
.Gudiga iskuXirka Haweenka oo lagu doortey Baydhabo
.Qaraxyo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay Muqdisho
.Badbaado “Nin Nambar Afar iyo Kaaraan aan dhex dhexaad..
.Dowladda Talyaaniga oo Baydhabo ka soo dejisay deeq ay..
.Banaanbax lagu taageerayey shirka dib u heshiisiinta oo...
Wararkii July 25, 2007 ka akhri halkan...